အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့မနက်ပိုင်း သိသင့်တဲ့သတင်းများ
27 ต.ค. 2561 - 09:06 น.
ပထမအချီမှာတင် လက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူခဲ့
မြန်မာ့ စပါးအုံး အောင်လ အမိမြေမှာ ထပ်မံအနိုင်ရ
အောင်လအန်ဆန်ဟာ ပထမအချီမှာတင် လက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။ စိန်ခေါ်ခဲ့သူ မိုဟာမက်ခရာခီကတော့ အောင်လကို ချုပ်ကွက်တွေနဲ့ လှဲသိပ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် အောင်လရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ လက်သီးချက်တွေကို မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ညက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲမှာ မြန်မာ့ စပါးအုံးလို့လည်း နာမည် ကြီးတဲ့ အောင်လဟာ ပထမအချီစလို့ မကြာခင်မှာပဲ လက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူ ခဲ့ပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက မွေးမြူရေး ငါး၊ပုစွန်တွေ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို စတင်တင်ပို့ခွင့်ရပြီ
မြန်မာနိုင်ငံက မွေးမြူရေး ငါး၊ပုစွန်တွေ ဥရောပသမဂ္ဂဈေးကွက်ထဲကို စတင်တင်ပို့ခွင့်ရပြီလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ကနေသိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက သဘာဝငါး၊ပုစွန်တွေကို အရင်ကတည်းက တင်ပို့ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့် မွေးမြူရေး ရေထွက်ကုန် တွေကို ဓာတုဓာတ်ကြွင်းမကင်းစင်လို့ဆိုပြီး တင်ပို့ခွင့် မပြုခဲ့ရာက အခု အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီး ဓာတုဓာတ်ကြွင်းကင်းစင်တဲ့ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့မှီတဲ့ မွေးမြူရေး ပုစွန်နဲ့ ငါးတွေ ကို စတင်တင်ပို့ခွင့်ပြုလိုက် တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့မွေးမြူရေးရေထွက်ကုန်တွေ တင်ပို့ခွင့်ကို ဥရောပသမဂ္ဂက အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကို ယာယီအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးဖို့ မက္ကစီကို အခွင့်အရေးပေး
မက္ကစီကိုက နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံနေတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကို ယာယီအလုပ်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကအလယ်ပိုင်းက ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေဟာ ကြီးမားလှတဲ့ လူအုပ်တန်းကြီး အဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။
ဒီအစီအစဉ်မှာ ယာယီအသိအမှတ်ပြုကတ်ပြားတွေပါထုတ်ပေးပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ကျောင်းစရိတ်ပါထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့သူတွေကိုသာ ကမ်းလှမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီး မပြည့်မှီသူတွေကတော့ မက္ကစီကို တောင်ပိုင်းက Chiapas နဲ့ Oaxacaပြည်နယ်တွေမှာ ထားပြီး ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဘက်ကတော့ အမေရိကန် - မက္ကစီကို နယ်စပ်က ရွှေ့ပြောင်းလူအုပ်တန်းကြီးကို တားဆီးဖို့ အတွက် စစ်သား ၈၀၀ လောက်ကို စေလွှတ်သွားမယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့မနက်ပိုင်း သိသင့်တဲ့သတင်းများ